स्वीकृत गरेको नेपालको नयाँ नक्सा अब तत्कालै प्रयोगमा ल्याइने ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/स्वीकृत गरेको नेपालको नयाँ नक्सा अब तत्कालै प्रयोगमा ल्याइने !
स्वीकृत गरेको नेपालको नयाँ नक्सा अब तत्कालै प्रयोगमा ल्याइने !
सरकारले स्वीकृत गरेको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको नेपालको नयाँ नक्सामा भारतद्धा’रा अ’तिक्र’मित नेपालको भूमिहरु लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएका छन् । यसैगरी नेपालको नयाँ नक्सामा संघीयतामा गएपछि बनाइएका प्रदेश र स्थानीय तह पनि समेटिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको बैठक पछि सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नयाँ नक्सामा उत्तरी पूर्व र पश्चिमी नक्साहरुसहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रवन्ध पनि समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।
जारी नयाँ नक्सा सबै सरकारी कामकाज र अन्य सबै क्षेत्रमा तत्काल प्रयोगमा ल्याइने पनि जनाइएको छ ।
जन्माएर आफ्नै आमाले नालिमा फालेको शिशुलाई कुकुरले उद्दार गरेर बचायो
भर्खरै १६६ कोरोना संक्रमित थपिए, संक्रमितको संख्या १५ सय ६७ पुग्यो